Naghachi DWG Ihe osise site na Temporary Faịlụ
Home ngwaahịa DataNumen DWG Recovery Naghachi DWG Ihe osise site na Temporary Faịlụ
Mgbe emebere atụmatụ Autosave na AutoCAD, ọ ga-eme ike ndabere faịlụ na-akpaghị aka mgbe ị na-ese ihe osise. Site na ndabara, a ga-echekwa faịlụ ndabere na Windows temporary ndekọ na ndọtị faịlụ ahụ bụ .sv $.
Dị ka ihe atụ, mgbe ọdachi data mere, dịka ọmụmaatụ, AutoCAD dara ma ọ bụ kwụsị ọrụ ọzọ n'oge na-adịghị mma, ịnwere ike weghachite data echekwara na ya.Ọgwụ $ faịlụ site na ịchọta faịlụ nchekwa akpaaka, na-edegharị aha na.Ọgwụ $ ndọtị na- .dwg wee mepee faịlụ ahụ na AutoCAD. The autosave file ga-ebu niile na-eru ozi dị ka nke ikpeazụ oge autosave efehe.
Ọ bụrụ na AutoCAD na-akọ mperi mgbe ị mepee faịlụ nchekwa nchekwa aha, mgbe ahụ nke ahụ pụtara na faịlụ nchekwa nchekwa ahụ nwekwara nrụrụ ma ọ bụ mebie n'ihi ọdachi data
AutoCAD nwere iwu "Naghachi" etinyere n'ime ya nke enwere ike iji weghachite faịlụ nchekwa akpaaka rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi, dị ka ndị a:
Họrọ menu Faịlụ> ịbịaru akụrụngwa> Naghachi
Na Họrọ File dialog igbe (a ọkọlọtọ faịlụ nhọrọ dialog igbe), itinye rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi ịbịaru faịlụ aha ma ọ bụ họrọ faịlụ.
A na-egosipụta nsonaazụ mgbake na windo ederede.
Ọ bụrụ na enwere ike weghachite faịlụ ahụ, a ga-emeghe ya na windo windo.
Ọ bụrụ na enweghị ike weghachite faịlụ ahụ na AutoCAD, mgbe ahụ ịnwere ike iji ngwaahịa anyị DataNumen DWG Recovery ịrụkwa ihe arụzi autosave faịlụ na idozi nsogbu.
Ihe nlele autosave file: sample_autosave.sv $
Nchekwa onwe nke AutoDesk
Ghọta AutoCAD ndabere na nchekwa faịlụ